XOG: Kulan aflagaado ku dhamaaday oo dhex maray beesha Waceysle iyo Xaaf - Caasimada Online
Home Warar XOG: Kulan aflagaado ku dhamaaday oo dhex maray beesha Waceysle iyo Xaaf
XOG: Kulan aflagaado ku dhamaaday oo dhex maray beesha Waceysle iyo Xaaf
Londan (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf iyo Odayaal Dhaqameed u dhashay Beesha waceeysle ayaa kulan ay ku yeesheen Magaalada London Ee Dalka Ingariiska waxaa uu kusoo dhamaaday Natiijo La’aan waxaana ay ku kala Tageen Caay iyo Aflagaado.
Beesha Waceeysle ayaa Kol Hore Ku dhawaaqday in ay ka Baxday Maamulka Galmudug Ka dib Kullan dhowr bil ka hor ka dhacay Cadaado.
Madaxweyne Xaaf ayaa khilaaf muddo soo jiray uu kala dhaxeeyaa madaxweyne ku xigeenka Galmudug iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka inkastoo dhawaan la shaaciyey in heshiis laga gaaray arrintaas iyadoo aan la caddeyn waxa lagu heshiiyey.
Maamulka Galmudug ayaa noqday mid fadhiisad ah mana uusan qaban wax shaqo ah tan iyo markii la abuuray.
Maamulka Galmudug ayaa tan iyo markii la dhisay ku jiray Khilaaf iyo loolan u dhaxeeyo madaxda ugu sareyso.
Galmudug ayaa hadda Caasimad looga dhigay Dhuusa Mareeb sida uu qabo Dastuurka Maamulkaas kadib muddo Cadaado loogu shaqeeyey si kumeel gaar ah.